10 Inta Badan Magaalo Xeebeedyada Qurxoon Ee Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Inta Badan Magaalo Xeebeedyada Qurxoon Ee Yurub
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 15/01/2021)
Iyada oo Badweynta Atlantik dhinac ka tahay iyo magaalooyinka ugu quruxda badan dhinaca kale, ah 10 magaalooyinka xeebta ugu quruxda badan Yurub waa meelaha ugu wanaagsan ee lagu nasto oo lagu nasto oo aan la ilaawin. Ku nasanaaya buuraha dushooda, dhageysanaya hirarka badda, ku qoynaya biyaha badda ee aan nadiifka ahayn, ama ogaanshaha halyeeyada ka dambeeya dekedaha iyo munaaradaha, waa khibrado gaar ah oo aad ka heli doontid oo keliya xeebta Talyaaniga, France, iyo England.
1. Magaalo Xeebeedka Quruxda Badan ee Talyaaniga: Amalfi Coast
Guryaha caanka ah ee caanka ah ee iska indhatiraya Badda Tyrrhenian ee magaalada Amalfi waa kaar-kaamil. Sidaa darteed, Amalfi ayaa ugu sareysa dhamaan magaalooyinka xeebta Amalfi sida magaalo xeebeedka ugu quruxda badan dalka Talyaaniga. Intaa waxaa dheer, waxaad ogaan doontaa inay tahay meesha ugu riyood badan xagaaga ee Yurub. Tani waxay ku mahadsan tahay biyaha buluuga ah ee ka soo horjeeda buuraha, iyo guryo midabo badan leh oo abuuraya jawiga ugu habboon ee looga bixi karo dhinaca badda.
Intaa waxaa dheer, hadaad rabto inaad waxbadan ogaato, ka dibna Amalfi Cathedral iyo villa Rufolo, Bixiyaan aragtiyo qurux badan oo ku saabsan Badda Dhexe iyo beerta. Si kastaba ha ahaatee, muuqaalka Amalfi waa 40 daqiiqo’ ka kaxee Vietri Sul Mare ilaa Positano oo ay la socdaan qaar ka mid ah aragtida ugu xiisaha badan xeebta.
2. Magaalo Xeebeedka Ugu Quruxda Badan Dalka Faransiiska: Saint-Malo
Halka Saint-Tropez iyo Nice ay yihiin 2 oo ka mid ah magaalooyinka xeebeed ee caanka ah ee Faransiiska, Saint-Malo oo ku taal Brittany kanaalka Ingiriisigu waa xeeb jawharad qarsoon. Tan waxaa ku mahadsan taariikhda iyo sheekooyinka hodanka ah ee ka dhacay xeebaha Saint-Malo. Magaalada Saint-Malo, waxaad dib ugu laaban doontaa waqtigii waqtiyada burcad-badeedda, iyo koorsooyinka Faransiiska, la dagaallamaya oo Grand France ka difaacaya qalcadda.
maanta, Meelaha waaweyn ee Saint-Malo waa kuwo cajiib ah oo socod ku dhex mara magaalada hore, admiring the sunset, iyo daawashada hirarka. Si aad si buuxda ugu qanciso soo jiidashada Saint-Malo waa inaad u hoydaa oo aad booqataa jasiiradaha Grand Be iyo Petit Be forts.
3. Magaalada Xeebeedka Qurxoon Ee Yurub: Lerici, Italy
Dad badani ma maqal magaalada Lerici ee Talyaaniga Riviera, mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan xeebta Yurub. Deriskeeda magaalada La Spezia dekedda ayaa laga yaabaa inay tahay barta laga bilaabo safarkaaga Cinque Terre, laakiin Lerici wuxuu leeyahay sixir aan la ogaan karin. Waxaad heli doontaa Lerici 8 kiiloomitir koonfur-bari ee La Spezia, oo leh guryo rinji leh, dambas, deked, qalcaddii 12-qarnigii badda fiirinayay, aragtiyo yaab leh, iyo wadooyinka hortayada dhanka xeebta.
Waxaa intaa dheer, Lerici waa barta aasaasiga ah ee safarkaaga safarka xeebaha Talyaaniga: The quruxda badan Cinque Terre, Portofino, iyo Portoverane. Waxaad sidoo kale safar maalinle ah ugu tagi kartaa Pisa qurux badan.
La Spezia oo ku socota Riomaggiore Tareen
Florence ilaa Riomaggiore Tareen Tareen ah
Modena ilaa Riomaggiore Tareen
Livorno ilaa Riomaggiore Tareen
4. Magaalo Xeebeedka Qurxoon ee Faransiiska: Cassis-Marseille
Dhagaxaanta nuuradda, biyo nadiif ah oo nadiif ah, aragti dusha sare ee xeebta laga soo buuxiyo makhaayadaha, Cassis ka dhig magaalo xeebeedka ugu jacaylka badan. Cassis waxay ku taalaa inta udhaxeysa xeebta ugu dheer Yurub, Cap Canaille, iyo Calanques nuuradda cad. Waxaa intaa dheer, gudaha Cassis, waxaad ka heli doontaa adduunka ugu fiican – Beerta canabka ah ee Provence, iyo badda weyn ee Mediterranean.
Koobid hal galaas oo khamri Rose ah, daawashada kaluumeysatada, waxay noqon doontaa muuqaalka ugu muhiimsan ee fasaxaaga magaaladan xeebta leh ee sixirka ah. Jawharad Tani French Hidden waa tareen ka fog Marseille, iyo ka soo bixitaanka saxda ah ee magaalada mashquulka badan.
Paris ilaa La Rochelle Tareen Tareen ah
5. Arromanches-Les-Bains Gudaha Faransiiska
Caan ku ah Soo Degitaanka Normandy, Arromanches waa magaalo xeebeed qurux badan oo ku taal gobolka Normandy ee Faransiiska. Ka soo horjeedda barta milatari mar bay ahayd, maanta waxaad ka heli doontaa magaalo xeebeed qurux badan oo ku taal xeebta Atlantic.
Sidaa darteed, waxaad ku jirtaa fasax lama iloobaan ah oo dhanka badda ah, quusin leh, rarida, faras fuulid xeebta dahabiga ah, iyo qorax-maydhashada. Fasax gaaban ama dheer, waxaad ku raaxeysan doontaa badda leh Arromanches-Les-Bains’ 550 deggan, iyo waayo-aragnimo ah Sixir Normandy.
Paris ilaa Rouen Tareen
Paris ilaa Lille Tareen
Rouen to Brest Tareen Tareen
Rouen ilaa Le Havre Tareen
Xeebta Cornish waxay u fidsan tahay ilaa 679 kiiloomitir oo buuro ah, godadka, iyo xeebaha. Tani waxay ku darsaneysaa xaaladda Cornwall inay tahay magaalada ugu wanaagsan ee ku soo qulqula UK. Sidaas, haddii aad qorsheyneyso inaad ku darto howlaha isboortiga biyaha fasaxaaga xeebta, Cornwall waa qumman yahay.
Magaalada ugu quruxda badan xeebta ee Great Britain waa jasiirad qurux badan. Sidaa darteed, meel kasta oo aad u jeedsato, waxaad is arki doontaa adiga oo taagan xeebta cajiibka ah. Aragtida ugu fiican ee Cornwall's xeebaha ugu fiican iyo xeebta, waad mari kartaa wadada Xeebta Koonfur Galbeed.
7. Magaalada Xeebta Honfleur ee Faransiiska
Haddii aad raadineyso magaalo xeebeedka ugu fiican Faransiiska, markaa Honfleur ayaa jawaab ah. Goobta kulanka ee wabiga Seine iyo badda, doonyaha webiga, guryo midabo badan leh oo ka dhex muuqda badda, wuxuuna ku socdaa xeebta, Honfleur ka dhig mid ka mid ah 10 magaalooyinka xeebta ugu quruxda badan Yurub.
Oktoobar waa waqtiga ugu fiican ee la tago oo lagu raaxeysto marina iyo hawo nadiif ah oo xeebta ku taal Honfleur. Waxay noqon doontaa hab fiican oo lagu sagootiyo xagaaga oo qoraxdu qoyso kana fogaato qoyaanka, iyo dad badan oo dalxiisayaal ah.
Rouen ilaa Paris Tareenka
Paris ilaa Calais Tareen
Rouen ilaa Calais Tareen
8. Santa Cesarea Terme Talyaaniga
Santa Cesarea Terme waa magaalo xeebeed cajiib ah oo ku taal Puglia. Badaal eegaysa, waxaad ku raaxeysan doontaa badda wanaagsan iyo maydhashada kuleylka leh ee ku aaddan fasaxaaga Talyaaniga.
Marka la barbardhigo magaalooyinka kale ee xeebta leh ee Talyaaniga, Santa Cesarea waxaa lagu kala soocayaa iyada Qaab dhismeedka islaamka. Taas macnaheedu waxa weeye, guryo cadcad oo qurux badan iyo munaarado ku wareegsan magaalada, oo waxaad u egtahay gabi ahaanba qurux badan badweynta buluugga ah. Haddii aad go'aansato inaad booqato magaaladan quruxda badan ee xeebta leh, waxaad nasiib u yeelan kartaa inaad sii joogto mid ka mid ah qalcadaha-hudheelada badan ee magaalada laga beddelay.
Naples ilaa Bari Tareen
Bari ilaa Fasano Tareen
Naples ilaa Fasano Tareen
9. Baaruud (used), Belgium
Magaalada Old Brugge waa mid ka mid ah kuwa ugu badan xarumo qurux badan oo magaalooyin ku yaal Yurub. Brugge sidoo kale wuxuu hayaa cinwaanka mid ka mid ah 10 magaalooyinka xeebta ugu quruxda badan Yurub. Jihooyinka badda agteeda waa aragti la yaab leh indhaha, leh kanaalladeeda, doomaha, iyo guryo qurux badan.
Oo leh xeeb qurux badan, maaha wax lala yaabo boqorro badan oo Flemish ah ayaa doortay, Brugge sida gurigooda. Sidaa darteed, waa inaad u diyaar garowdaa tirada ugu weyn ee qalcadaha iyo munaaradaha badda fiiriya.
Magaalada quruxda badan ee Venice ayaa xireysa 10 magaalooyinka ugu quruxda badan xeebaha ee Yurub. Dhismaha, gelato, iyo raacid doon ka dhig Venice goob riyadeed oo buuxda oo dhinaca badda ah.
Venice waxay ku nooshahay badda, waana sababta ay u tahay magaalo xeebeedka ugu dambeeya Yurub oo dhan. Talyaanigu waxay jecel yihiin Venice, dalxiisayaashuna way jecelyihiin. Waxaad heli doontaa waqti layaableh oo ku meeraysta luuqyada iyo jidadka cidhiidhiga ah.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonaa inaan kaa caawino qorsheynta safarkaaga "10ka magaalo ee xeebta ugu quruxda badan Yurub '.
Ma rabtaa in aad ku dhajiso bartayada mareegta "10 Meelaha Xeebta Ugu Quruxda Badan Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeautiful-coastal-towns-europe%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)